Imibandela – SL Raw Virgin Hair LLC.
Ubhasikidi wakho awunalutho
Sicela ukhethe leli bhokisi ukuze uvumelane nemigomo nemibandela yethu
Isamba esingaphansi $0.00
Faka i-oda lakho
UKUTHUMELA KWAMAHHALA KUMA-ODA ASE-US $299.99+
Amathuluzi Ezinwele Nezesekeli
Kungani i-SL Raw Virgin Hair®
I-Fit and Go Wigs
Abathengisi Abangcono Kakhulu
Izinqwaba Zezinwele Zomuntu
Iqoqo Le-SL Raw Exclusive
Izinto Zethuba Lokugcina
I-Wig ENTSHA yaseBrazil Deep Wave U-Part Wig
Amathiphu AMASHA Angenamthungo
OKUSHA Straight Bob Wig
10" Inqwaba Yezinwele Eziqondile (100g)
12" Izinwele Zemvelo Ezimagagasi (100g)
16" Izinwele Ezigoqiwe I-I-tip (50g)
12" Inqwaba Yezinwele Ezigoqe Kalula (100g)
$20 Ikhadi Lesipho
Izinqwaba zezinwele ze-Weft
I-Kinky Straight Textured
Ukuvalwa Kweleyisi Eboshwe Ngesandla Nezangaphambili
4X4 Lace Ukuvalwa
5X5 Ukuvalwa kwe-Wavy Lace
I-4x4 Curly Lace Ukuvalwa
4X4 Kinky Straight Lace Ukuvalwa
2C kuya ku-3A Amathiphu
3B kuya ku-4A Amathiphu
4A kuya ku-4C Amathiphu
I-Kinky Straight I-Tips
Izigaxa Zezinwele Eziqondile
Izinqwaba zezinwele ezigobile
Izigaxa Zezinwele Ezihlanganisiwe
Izigaxa Zezinwele Ezimpunga (Kasawoti 'N')
I-Lace Front Wigs
I-Lace Closure Wigs
Le webhusayithi isetshenziswa i-SL Raw Virgin Hair Kuso sonke isayithi, amagama athi “thina”, “thina” kanye “wethu” abhekisela ku-SL Raw Virgin Hair. . I-SL Raw Virgin Hair inikeza le sizindalwazi, okuhlanganisa lonke ulwazi, amathuluzi nezinkonzo ezitholakala kule sayithi kuwe, umsebenzisi, ezincike ekwamukeleni kwakho yonke imigomo, imibandela, izinqubomgomo kanye nezaziso ezishiwo lapha.
Ngokuvakashela isizindalwazi sethu kanye/ noma uthenga okuthile kithi, uhileleka “Kusevisi” yethu futhi uvuma ukuboshwa yimigomo nemibandela elandelayo (“Imigomo Yesevisi”, “Imigomo”), okuhlanganisa leyo migomo nemibandela nezinqubomgomo ezibalulwe lapha kanye/noma ezitholakalayo. nge-hyperlink. Le Migomo Yesevisi isebenza kubo bonke abasebenzisi besayithi, okuhlanganisa ngaphandle komkhawulo abasebenzisi abayiziphequluli, abathengisi, amakhasimende, abathengisi, kanye/noma abanikeli bokuqukethwe.
Sicela ufunde le Migomo Yesevisi ngokucophelela ngaphambi kokufinyelela noma ukusebenzisa iwebhusayithi yethu. Ngokufinyelela noma ukusebenzisa noma iyiphi ingxenye yesayithi, uvuma ukuboshwa yile Migomo Yesevisi. Uma ungavumelani nayo yonke imigomo nemibandela yalesi sivumelwano, ngeke ukwazi ukungena kuwebhusayithi noma usebenzise noma yiziphi izinsiza. Uma le Migomo Yesevisi ithathwa njengokunikezwayo, ukwamukelwa kukhawulelwe ngokusobala kule Migomo Yesevisi.
Noma yiziphi izici ezintsha noma amathuluzi engezwe esitolo samanje nazo zizoba ngaphansi Kwemigomo Yesevisi. Ungabuyekeza inguqulo yamanje kakhulu Yemigomo Yesevisi noma kunini kuleli khasi. Sinelungelo lokubuyekeza, ukushintsha noma ukufaka esikhundleni noma iyiphi ingxenye yale Migomo Yesevisi ngokuthumela izibuyekezo kanye/noma izinguquko kuwebhusayithi yethu. Kuyisibopho sakho ukuhlola leli khasi ngezikhathi ezithile ukuze uthole izinguquko. Ukuqhubeka kwakho nokusebenzisa noma ukufinyelela iwebhusayithi ngemva kokuthunyelwa kwanoma yiziphi izinguquko kuhlanganisa ukwamukela lezo zinguquko.
Isitolo sethu siphethwe kwa-Shopify Inc. Basinikeza inkundla ye-e-commerce e-inthanethi esivumela ukuthi sithengise imikhiqizo yethu futhi amasevisi kuwe.
ISIGABA 1 - IMIGOMO YESITOLO SE-ONLINE
Ngokuvumelana nale Migomo Yesevisi, umela ukuthi uneminyaka okungenani yobudala eningi esifundeni sakho noma esifundazweni ohlala kuso, noma ukuthi uneminyaka yobudala. iningi esifundazweni sakho noma esifundazweni ohlala kuso futhi usinike imvume yakho yokuvumela noma yibaphi abancike kuwe abancane ukuthi basebenzise lesi sizindalwazi.
Awukwazi ukusebenzisa imikhiqizo yethu nganoma yiziphi izinjongo ezingekho emthethweni noma ezingagunyaziwe futhi, ngokusebenzisa Isevisi, ungephule noma yimiphi imithetho endaweni yakho (okuhlanganisa kodwa kungagcini nje ngemithetho ye-copyright).
Akumele udlulise noma yiziphi izikelemu noma amagciwane nanoma iyiphi ikhodi elimazayo.
Ukwephulwa noma ukwephulwa kwanoma yimiphi Imibandela kuzoholela ekunqanyulweni KweziNsizakalo zakho ngokushesha.
ISIGABA 2 - IMIBANDELA EJWAYELEKILE
Sinelungelo lokwenqaba isevisi kunoma ubani nganoma isiphi isizathu nganoma yisiphi isikhathi.
Uyaqonda ukuthi okuqukethwe kwakho (okungabandakanyi imininingwane yekhadi lesikweletu), kungase kudluliswe kungabhaliwe futhi kubandakanye (a) ukudluliselwa ngamanethiwekhi ahlukahlukene; kanye (b) nezinguquko ukuze zivumelane futhi zivumelane nezimfuneko zobuchwepheshe zokuxhuma amanethiwekhi noma izisetshenziswa. Ulwazi lwekhadi lesikweletu luhlala lubethelwa ngesikhathi sokudlulisa ngamanethiwekhi.
Uyavuma ukuthi ngeke ukhiqize kabusha, uphindaphinde, ukopishe, udayise, udayise kabusha noma uxhaphaze noma iyiphi ingxenye Yesevisi, ukusetshenziswa Kwesevisi, noma ukufinyelela Isevisi nanoma yimuphi omunye othintana naye kuwebhusayithi lapho isevisi inikezwa khona, ngaphandle kokubhala ngokucacile. imvume yethu.
Izihloko ezisetshenziswe kulesi sivumelwano zibandakanyiwe ukuze kube lula kuphela futhi ngeke zibeke umkhawulo noma zithinte le Migomo.
ISIGABA 3 - UKUNEMBA, UKUPHELELISA KANYE NOBUGQISHO BESIKHATHI KOLWAZI
Asinacala uma ulwazi lwenziwa lwatholakala kulokhu. indawo ayilungile, ayiphelele noma ayimanje. Izinto ezikule sayithi zinikezwe ulwazi olujwayelekile kuphela futhi akufanele kuthenjelwe kukho noma kusetshenziswe njengesisekelo sodwa sokwenza izinqumo ngaphandle kokubonisana nemithombo yolwazi eyinhloko, enembe kakhudlwana, ephelele noma efika ngesikhathi. Noma yikuphi ukuthembela ezintweni ezikule sayithi kuzifaka engozini ngokwakho.
Le sayithi ingase iqukathe ulwazi oluthile lomlando Ulwazi olungokomlando, empeleni, akulona olwamanje futhi luhlinzekelwe inkomba yakho kuphela. Sinelungelo lokushintsha okuqukethwe yile sayithi nganoma yisiphi isikhathi, kodwa asinasibopho sokubuyekeza noma yiluphi ulwazi kusayithi lethu. Uyavuma ukuthi kuyisibopho sakho ukuqapha izinguquko kusayithi lethu.
ISIGABA 4 - UKUSHINTSHA INKONZO KANYE NEZINTENGO
Izintengo zemikhiqizo yethu zingashintsha ngaphandle kwesaziso.
Sigodla ilungelo noma kunini lokushintsha noma ukumisa Isevisi (noma iyiphi ingxenye noma okuqukethwe kwayo) ngaphandle kwesaziso nganoma yisiphi isikhathi.
Ngeke sibe nesibopho kuwena noma kunoma yimuphi umuntu wesithathu nganoma yikuphi ukuguqulwa, ukuguqulwa kwentengo, ukumiswa noma ukuyekiswa kwesevisi.
ISIGABA 5 - IMIKHIQIZO NOMA IZINKONZO (uma kusebenza)
Imikhiqizo ethile noma amasevisi. ingatholakala ku-inthanethi kuphela ngewebhusayithi. Le mikhiqizo noma amasevisi angase abe nenani elilinganiselwe futhi angaphansi kokubuyiselwa noma ukushintshaniswa kuphela ngokuya Ngenqubomgomo yethu Yokubuyisela.
Senze yonke imizamo ukuze sibonise ngokunembe ngangokunokwenzeka imibala, indlela yokwenza, amaphethini ama-curl, nezithombe zemikhiqizo yethu evela esitolo. Ngeke siqinisekise ukuthi isibonisi sekhompuyutha yakho yanoma yimuphi umbala noma ukuthungwa sizonemba.
Sigodla ilungelo, kodwa asibophezelekile, ukukhawulela ukuthengiswa kwemikhiqizo yethu noma Izinkonzo kunoma yimuphi umuntu, isifunda sendawo noma indawo. Izinto ezithengiswayo, i-BOGO, noma izinto ze-Instant Saver azikwazi ukwehliswa nganoma yimaphi amakhodi ephromo noma zihlanganiswe nanoma yiziphi ezinye izipesheli. Singalisebenzisa leli lungelo ngokwesisekelo secala ngalinye. Sinelungelo lokukhawulela inani lanoma yimiphi imikhiqizo noma amasevisi esiwanikezayo. Zonke izincazelo zemikhiqizo noma intengo yomkhiqizo zingashintsha noma nini ngaphandle kwesaziso, ngokubona kwethu. Sinelungelo lokuyeka noma yimuphi umkhiqizo nganoma yisiphi isikhathi. Noma imuphi umnikelo wanoma yimuphi umkhiqizo noma isevisi eyenziwe kule sayithi ayisebenzi lapho kunqatshelwe khona.
Asiqinisekisi ukuthi ikhwalithi yanoma yimiphi imikhiqizo, amasevisi, ulwazi, noma okunye okuthengiwe noma okutholwe nguwe kuzofinyelela okulindele, noma noma imaphi amaphutha Kusevisi azolungiswa.
ISIGABA 6 - UKUNEMBA INKOKHELO KANYE NEMINININGWANE YE-AKHAWUNTI
Sinelungelo lokwenqaba noma yiliphi i-oda olifaka kithi. Ngokubona kwethu, singakhawulela noma sikhansele amanani athengwe ngomuntu ngamunye, indlu ngayinye noma nge-oda ngalinye. Le mikhawulo ingase ihlanganise ama-oda afakwe noma ngaphansi kwe-akhawunti yekhasimende efanayo, ikhadi lesikweletu elifanayo, kanye/noma ama-oda asebenzisa ikheli elifanayo lokukhokha kanye/noma lokuthumela. Esimeni lapho senza ushintsho noma sikhansela i-oda, singase sizame ukukwazisa ngokuthinta i-imeyili kanye/noma ikheli lokukhokha/inombolo yocingo ehlinzekwe ngesikhathi kufakwa i-oda. Sinelungelo lokukhawulela noma ukwenqabela ama-oda okuthi, ngokwahlulela kwethu sodwa, abonakale ebekwe abathengisi, abathengisa umkhiqizo okwesibili noma abasabalalisi.
Uyavuma ukunikeza ukuthenga kwamanje, okuphelele nokunembile kanye nolwazi lwe-akhawunti kukho konke ukuthenga okwenziwa esitolo sethu. . Uyavuma ukubuyekeza ngokushesha i-akhawunti yakho nolunye ulwazi, okuhlanganisa ikheli lakho le-imeyili nezinombolo zekhadi lesikweletu nezinsuku zokuphelelwa yisikhathi, ukuze sikwazi ukuqedela okwenzayo futhi sikuthinte njengoba kudingeka.
Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, sicela ubuyekeze Inqubomgomo yethu Yokubuyisela.
ISIGABA 7 - AMATHULUSI ONGAZITHANDELA
Singase sikunikeze ukufinyelela kumathuluzi ezinkampani zangaphandle esingawaqapheli noma esingenawo ukulawula noma okokufaka.
Uyavuma futhi uyavuma ukuthi sinikeza ukufinyelela kumathuluzi anjalo ”njengoba enjalo” kanye “njengoba etholakala” ngaphandle kwanoma yiziphi iziqinisekiso, izethulo noma imibandela yanoma yiluphi uhlobo futhi ngaphandle kwanoma yikuphi ukugunyazwa. Ngeke sibe nesibopho sezomthetho esivela noma esihlobene nokusebenzisa kwakho amathuluzi ezinkampani zangaphandle.
Noma yikuphi ukusebenzisa kwakho amathuluzi ozikhethela ahlinzekwa ngesayithi kuyingozi yakho futhi ngokubona kwakho futhi kufanele uqinisekise ukuthi ujwayelene futhi uyavumelana nemigomo lapho amathuluzi anikezwa khona abahlinzeki abafanelekile benkampani yangaphandle. ).
Singase futhi, esikhathini esizayo, sinikeze amasevisi amasha kanye/noma izici ngewebhusayithi (okuhlanganisa, ukukhishwa kwamathuluzi amasha nezisetshenziswa) Lezo zici ezintsha kanye/noma amasevisi nazo zizoba ngaphansi kwale Migomo Yesevisi.
ISIGABA SESI-8 - IZIXHUMANO ZOKUTHILE
Okunye okuqukethwe, imikhiqizo namasevisi atholakala ngesevisi yethu angase ahlanganise izinto eziphuma kwabanye abantu.
Izixhumanisi zezinkampani zangaphandle kuleli sayithi zingakuqondisa kumawebhusayithi ezinkampani zangaphandle angaxhumene nathi. Asinaso isibopho sokuhlola noma ukuhlola okuqukethwe noma ukunemba futhi asinawo amawaranti futhi ngeke sibe necala noma isibopho sanoma yiziphi izinto zezinkampani zangaphandle noma amawebhusayithi, noma nganoma yiziphi ezinye izinto, imikhiqizo, noma izinsizakalo zezinkampani zangaphandle.
Asinasibopho sanoma yikuphi ukulimala noma ukulimala okuhlobene nokuthengwa noma ukusetshenziswa kwezimpahla, amasevisi, izinsiza, okuqukethwe, nanoma yikuphi okunye ukuthenga okwenziwe ngokuhlobene nanoma imaphi amawebhusayithi ezinkampani zangaphandle. Sicela ubuyekeze ngokucophelela izinqubomgomo nezinqubo zenkampani yangaphandle futhi uqiniseke ukuthi uyaziqonda ngaphambi kokwenza noma yikuphi ukuthenga. Izikhalazo, izimangalo, ukukhathazeka, noma imibuzo emayelana nemikhiqizo yezinkampani zangaphandle kufanele iqondiswe kumuntu wesithathu.
ISIGABA SESI-9 - IMIBONO YAMSEBENZISI, IMPENDULO KANYE NEEZINYE IMIBANDLA
Uma, ngokwesicelo sethu, uthumela ukuthunyelwa okuthile okuthile ( isibonelo imincintiswano) noma ngaphandle kwesicelo esivela kithi uthumela imibono yokudala, iziphakamiso, iziphakamiso, izinhlelo, noma ezinye izinto, kungaba ku-inthanethi, nge-imeyili, ngeposi, noma ngenye indlela (ngokuhlangene, 'ukuphawula'), uyavuma ukuthi nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kokuvinjelwa, ahlele, akopishe, ashicilele, asabalalise, ahumushe futhi asebenzise nganoma iyiphi indlela noma yikuphi ukuphawula osithumelela kona. Sibophezelekile futhi ngeke sibe ngaphansi kwesibopho (1) sokugcina noma yikuphi ukuphawula ngokuyimfihlo; (2) ukukhokha isinxephezelo sanoma yikuphi ukuphawula; noma (3) ukuphendula noma yikuphi ukuphawula.
Singahle, kodwa singabi nasibopho sokuqapha, ukuhlela, noma ukususa okuqukethwe esinquma ukuthi ngokubona kwethu akukho emthethweni, kuyacasula, kusongela, kuyindelelo, kuhlambalaza, izithombe ezingcolile zobulili, okuyichilo noma okungamukeleki ngandlela-thile noma kwephula impahla yengqondo yanoma iyiphi inhlangano noma lezi. Imigomo Yesevisi.
Uyavuma ukuthi ukuphawula kwakho ngeke kwephule noma yiliphi ilungelo lanoma yimuphi umuntu wesithathu, okuhlanganisa i-copyright, uphawu lokuhweba, ubumfihlo, ubuntu noma elinye ilungelo lomuntu siqu noma lobunikazi. Uyavuma futhi ukuthi amazwana akho ngeke aqukathe izinto ezihlambalazayo noma ezingekho emthethweni, ezihlukumezayo noma ezinenhlamba, noma aqukathe noma yiliphi igciwane lekhompyutha noma olunye uhlelo olungayilungele ikhompuyutha olungathinta noma iyiphi indlela ukusebenza Kwesevisi nanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene. Akumele usebenzise ikheli le-imeyili elingamanga, uzenze omunye umuntu ngaphandle kwakho, noma usidukise noma usikhohlise noma abantu besithathu mayelana nomsuka wanoma yikuphi ukuphawula. Unesibopho sakho kuphela nganoma yimaphi amazwana owenzayo kanye nokunemba kwawo. Asizibophezeli futhi asithwesi icala nganoma yimaphi amazwana athunyelwe nguwe noma omunye umuntu.
ISIGABA 10 - ULWAZI LOMUNTU
Ukuhambisa kwakho ulwazi lomuntu siqu esitolo kubuswa Inqubomgomo yethu Yobumfihlo. Ukubuka Inqubomgomo yethu Yobumfihlo.
ISIGABA 11 - AMAPHUTHA, AMAPHUTHA, OKUNGENZIWA KANYE NOKUKWEQIWA
Ngezinye izikhathi kungase kube khona ulwazi esizeni sethu noma kuNsizakalo equkethe amaphutha okubhala, okungalungile noma okushiywe okungase kuhlobane nezincazelo zomkhiqizo, amanani, ukukhushulwa. , okunikezwayo, izindleko zokuthumela umkhiqizo, izikhathi zokuhamba nokutholakala. Sinelungelo lokulungisa noma yimaphi amaphutha, okungalungile noma okungenziwanga, kanye nokushintsha noma ukubuyekeza ulwazi noma ukukhansela ama-oda uma noma yiluphi ulwazi Kusevisi noma kunoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene lungalungile nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso sangaphambili (kuhlanganise nangemva kokuhambisa i-oda lakho) .
Asibophezelekile ukuthi sibuyekeze, sichibiyele noma sicacise ulwazi Lwesevisi noma kunoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, okuhlanganisa ngaphandle komkhawulo, ulwazi lwentengo, ngaphandle uma kudingwa umthetho.Asikho isibuyekezo esicacisiwe noma idethi yokuvuselela esetshenziswe Kusevisi noma kunoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, okufanele ithathwe ukuze kuboniswe ukuthi lonke ulwazi Kusevisi noma kunoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene lushintshiwe noma lwabuyekezwa
ISIGABA 12 - UKUSETSHENZISWA OKUVIMBIWE
Ngaphezu kwalokho. kokunye ukuvinjelwa njengoba kubekwe eMigomo Yesevisi, awuvunyelwe ukusebenzisa isayithi noma okuqukethwe kwayo: (a) nganoma iyiphi injongo engekho emthethweni; (b) ukunxenxa abanye ukuthi benze noma bahlanganyele kunoma yiziphi izenzo ezingekho emthethweni; (c) ukwephula noma yimiphi imithetho yamazwe ngamazwe, yefederal, yesifundazwe noma yombuso, imithetho, imithetho, noma izimiso zendawo; (d) ukwephula noma ukwephula amalungelo ethu empahla yengqondo noma amalungelo empahla yobuhlakani babanye; (e) ukuhlukumeza, ukuhlukumeza, ukuthuka, ukulimaza, ukuhlambalaza, ukunyundela, ukuhlambalaza, ukusabisa, noma ukubandlulula ngokusekelwe kubulili, ukukhetha ubulili obuthile, inkolo, ubuzwe, uhlanga, ubudala, imvelaphi yobuzwe, noma ukukhubazeka; (f) ukuhambisa ulwazi olungamanga noma oludukisayo; (g) ukulayisha noma ukudlulisa amagciwane nanoma yiluphi olunye uhlobo lwekhodi eyingozi engasetshenziswa noma engase isetshenziswe nganoma iyiphi indlela ezothinta ukusebenza noma ukusebenza Kwesevisi noma kwanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, amanye amawebhusayithi, noma i-inthanethi; (h) ukuqoqa noma ukulandelela ulwazi lomuntu siqu lwabanye; (i) ukwenza ugaxekile, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, ikhemisi, izaba, isicabucabu, ukukhasa, noma ukuklebhula; (j) nganoma iyiphi inhloso eyichilo noma yokuziphatha okubi; noma (k) ukuphazamisa noma ukweqa izici zokuphepha zesevisi nanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, amanye amawebhusayithi, noma i-inthanethi. Sinelungelo lokunqamula ukusebenzisa kwakho Isevisi nanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene ngokwephula noma yikuphi ukusetshenziswa okunqatshelwe.
ISIGABA 13 - UMNQWANKO WEZIQINISEKISO; UMKHAWULO WOKUBOPHEZELA
Asiqinisekisi, asimeleli noma sigunyaza ukuthi ukusebenzisa kwakho insizakalo yethu ngeke kuphazamiseke, kufike ngesikhathi, kuvikeleke noma kungabi naphutha.
Asiqinisekisi ukuthi imiphumela engatholwa ngokusebenzisa isevisi izoba enembayo noma ethembekile.
Uyavuma ukuthi ngezikhathi ezithile singase siyisuse isevisi isikhathi esingaziwa noma sikhansele insiza nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kokukwazisa.
Uvuma ngokucacile ukuthi ukusebenzisa kwakho, noma ukungakwazi ukusebenzisa, isevisi kusengozini yakho kuphela. Isevisi kanye nayo yonke imikhiqizo namasevisi alethwa kuwe ngesevisi (ngaphandle kwalokho okushiwo yithi) kuhlinzekwa 'njengoba injalo' futhi 'njengoba itholakala' ukuze ukusebenzise, ​​ngaphandle kwanoma yikuphi ukumelwa, iziqinisekiso noma imibandela yanoma yiluphi uhlobo, noma okushiwo, okuhlanganisa zonke iziqinisekiso ezishiwo noma izimo zentengiso, ikhwalithi ethengisekayo, ukufaneleka kwenjongo ethile, ukuqina, isihloko, nokungaphuli.
Akunacala lapho u-SL Raw Virgin Hair, abaqondisi bethu, izikhulu, abasebenzi, izikhulu, ama-ejenti, osonkontileka, abaqeqeshelwa umsebenzi, abahlinzeki, abahlinzeki besevisi noma abanikezeli bamalayisensi babophezeleke nganoma yikuphi ukulimala, ukulahlekelwa, isimangalo, nanoma yikuphi okuqondile, okungaqondile, okungaqondile. , umonakalo oyisijeziso, okhethekile, noma umphumela wanoma yiluphi uhlobo, okuhlanganisa, ngaphandle komkhawulo, inzuzo elahlekile, imali engenayo elahlekile, ukonga okulahlekile, ukulahlekelwa idatha, izindleko zokushintshwa, nanoma yimuphi umonakalo ofanayo, kungakhathaliseki ukuthi usekelwe esivumelwaneni, ubugebengu (kuhlanganise nobudedengu), isibopho sezomthetho esiqinile. noma ngenye indlela, okuvela ekusebenziseni kwakho insizakalo nanoma yimiphi imikhiqizo etholwe kusetshenziswa isevisi, nanoma yisiphi esinye isimangalo esihlobene nanoma iyiphi indlela yokusebenzisa kwakho isevisi nanoma yimuphi umkhiqizo, kuhlanganisa, kodwa kungagcini nje, noma imaphi amaphutha noma ukweqiwa. kunoma yikuphi okuqukethwe, noma yikuphi ukulahlekelwa noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo olwenzekile ngenxa yokusetshenziswa kwesevisi nanoma yikuphi okuqukethwe (noma umkhiqizo) okuthunyelwe, okudluliselwayo, noma okunye okwenziwe kutholakale ngesevisi, ngisho noma belulekwa ngokuthi kungenzeka. Ngenxa yokuthi ezinye izifunda noma iziphathimandla azikuvumeli ukukhishwa noma ukukhawulwa kwesibopho sezomthetho ngomonakalo olandelanayo noma wengozi, kulezo zifundazwe noma ezindaweni ezithile, isikweletu sethu sizokhawulelwa ngokwezinga eliphezulu elivunyelwe umthetho.
ISIGABA 14 - UKUBEKEZWA
Uyavuma ukukhulula, ukuvikela kanye nokubamba i-SL Raw Virgin Hair engenangozi kanye nomzali wethu, izinkampani eziphethwe ngenye, amanxusa, ozakwethu, izikhulu, abaqondisi, ama-ejenti, osonkontileka, abalayisensi, abahlinzeki besevisi, osonkontileka abancane, abahlinzeki, abaqeqeshwayo nabasebenzi, abangenabungozi kunoma yisiphi isimangalo noma isidingo, okuhlanganisa nezindleko zabameli ezifanele, ezenziwe yinoma yimuphi omunye umuntu ngenxa noma ngenxa yokwephula kwakho le Migomo Yesevisi noma imibhalo abawafaka ngereferensi, noma ukwephula kwakho noma yimuphi umthetho. noma amalungelo enkampani yangaphandle
ISIGABA 15 - UKUBAMBISANA
Esimeni lapho noma yikuphi ukuhlinzekwa kwale Migomo Yesevisi kunqunywa njengokungekho emthethweni, okuyize noma okungasebenziseki, lokho kunikezwa kuyophoqelelwa noma kunjalo kuze kufike ezingeni elivunyelwe. ngomthetho osebenzayo, futhi ingxenye engaphoqeleleki izothathwa njengenqanyuliwe kule Migomo Yesevisi, lokho kuzimisela ngeke kuthinte ukufaneleka nokusebenziseka kwanoma yiziphi ezinye izinhlinzeko ezisele.
ISIGABA 16 - ITHEMU INATION
Izibopho nezikweletu zezinkampani ezitholwe ngaphambi kosuku lokuqedwa zizosinda ekunqanyulweni kwalesi sivumelwano ngazo zonke izinjongo.
Le Migomo Yesevisi iyasebenza ngaphandle kwalapho futhi ize ipheliswe nguwe noma yithi. Unganqamula le Migomo Yesevisi noma nini ngokusazisa ukuthi awusafuni ukusebenzisa Izinkonzo zethu, noma lapho uyeka ukusebenzisa isayithi lethu.
Uma ngesinqumo sethu sodwa wehluleka, noma sisola ukuthi wehlulekile, ukuthobela noma yimiphi imigomo noma ukunikezwa kwale Migomo Yesevisi, singase futhi sinqamule lesi sivumelwano noma nini ngaphandle kwesaziso futhi uzohlala unesibopho sakho konke. amanani okumele akhokhe kuze kufike futhi abandakanye usuku lokuqedwa; futhi/noma ngenxa yalokho bangase bakunqabele ukufinyelela Ezinhlelweni zethu (noma iyiphi ingxenye yazo).
ISIGABA 17 - ISIVUMELWANO ESIPHELELE
Ukwehluleka kwethu ukusebenzisa noma ukuphoqelela noma yiliphi ilungelo noma ukunikezwa kwale Migomo Yesevisi angeke kwahlanganisa ukuyekwa kwalelo lungelo noma ukuhlinzekwa.
Le Migomo Yesevisi kanye nanoma yiziphi izinqubomgomo noma imithetho yokusebenza ethunyelwe yithi kule sayithi noma maqondana Nesevisi ihlanganisa sonke isivumelwano nokuqonda phakathi kwakho nathi futhi ibusa ukusebenzisa kwakho Isevisi, ithathela indawo noma yiziphi izivumelwano zangaphambili noma ezihambisana nesikhathi, ukuxhumana neziphakamiso, kungakhathaliseki ukuthi ngomlomo noma ezibhaliwe, phakathi kwakho nathi (kuhlanganise, kodwa kungagcini, kunoma yiziphi izinguqulo zangaphambili Zemigomo Yesevisi).
Noma yikuphi ukungaqondakali ekuchazeni le Migomo Yesevisi ngeke kuhunyushwe ngokumelene neqembu elibhalayo.
ISIGABA 18 - UMTHETHO OLAWULAYO
Le Migomo Yesevisi kanye nanoma yiziphi izivumelwano ezihlukene esikunikeza ngazo Izinkonzo zizobuswa futhi ihunyushwe ngokuhambisana nemithetho ye-5160 Van Nuys Blvd Unit 157 Sherman California US 91403.
ISIGABA 19 - IZINGUQUKO EMIBANDELA YENKONZO
Ungabuyekeza inguqulo yamanje kakhulu Yemigomo Yesevisi nganoma yisiphi isikhathi ngalesi sikhathi. ikhasi.
Sigodla ilungelo, ngokubona kwethu kuphela, ukubuyekeza, ukushintsha noma ukufaka esikhundleni noma iyiphi ingxenye yale Migomo Yesevisi ngokuthumela izibuyekezo nezinguquko kuwebhusayithi yethu. Kuyisibopho sakho ukuhlola iwebhusayithi yethu ngezikhathi ezithile ukuze uthole izinguquko. Ukuqhubeka kwakho nokusebenzisa noma ukufinyelela iwebhusayithi yethu noma Isevisi kulandela ukuthunyelwa kwanoma yiziphi izinguquko kule Migomo Yesevisi kuhlanganisa ukwamukela lezo zinguquko.
ISIGABA SESI-20 - ULWAZI LOXHUMANA NAYE
Imibuzo emayelana Nemigomo Yesevisi kufanele ithunyelwe ku- us at info@slrawvirginhair.com.
SL Izinwele Ezingavuthiwe ze-SL
Kungani SL Izinwele Eziluhlaza
Thatha Izinwele Zemibuzo
Joyina Uhlelo Lwemiklomelo
Landelela i-oda lami
Isebenza Kanjani I-Sezzle?
Ukubuyisela & Ukuhwebelana
Ukuthumela kanye Nokulethwa
Ukuthumela Emhlabeni Wonke
Indaba ka-SL Raw
Funda Ibhulogi Yethu
Izibuyekezo ze-SL Raw
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwezinwele
Buza Uchwepheshe Wobuhle?
© 2022 SL Raw Virgin Hair LLC. | Powered by Shopify